ဗီဒီယိုမှာမြင်ရတာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လမှာ အိန္ဒိယစစ်တပ် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေတာဖြစ်တယ် | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
ဗီဒီယိုမှာမြင်ရတာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လမှာ အိန္ဒိယစစ်တပ် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေတာဖြစ်တယ်
AFP ထိုင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ ကြာသပတေး 16 ဇွန် 2022 အချိန် 08:20
မြန်မာတပ်မတော်က ကိုကိုးကျွန်းမှာ အသံထက်မြန်တဲ့ BRAHMOS ဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေတာလို့ ဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို လူမှုမီဒီယာပို့စ်တွေမှာ အကြိမ်ရေ ရာနဲ့ချီ ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအဆိုဟာ မှားပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာမြင်ရတာဟာ အက်ဒမန်နဲ့ နီကိုဘာကျွန်းတွေမှာ အိန္ဒိယတပ်မတော်က ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၈ စက္ကန့်ကြာမြင့်တဲ့ဗီဒီယိုကို Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်က တင်ထားပြီး ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်ရေ ၉၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
“BRAHMOS Super Sonic Crusie Missile တစ်စင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် စမ်းသပ် ပစ်လွှတ် အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် တင်ပြပါရစေ.(ကိုကိုးကျွန်း)” (မူရင်းအတိုင်း)
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
BrahMos ဒုံးကျည်တွေဟာ အသံထက်မြန်တဲ့ ပဲ့ထိန်းခရုဇ်ဒုံးကျည်မျိုးဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားတို့ ပူးပေါင်း ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကိုးကျွန်းဟာ မြန်မာပိုင် အက်ဒမန်ပင်လယ်ထဲက ကျွန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကိုပဲ တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီအဆိုဟာ မှားပါတယ်။
Google မှာ ဓာတ်ပုံရာဇဝင်ရှာကြည့်တဲ့အခါ မတ်လ ၂၄ ရက်က အိန္ဒိယဥပဒေနဲ့တရားရေးဝန်ကြီး Kiren Rijiju တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Twitter ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ ရည်ညွှန်းစာမှာတော့ အိန္ဒိယစစ်တပ်က ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ရည်ညွှန်းစာသားတွေက အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “မြေပြင်မှမြေပြင်ပစ် အသံထက်မြန် #BRAHMOS ခရုဇ်ဒုံးကျည်ကို အက်ဒမန်နဲ့ နီကိုဘာကျွန်းတွေမှာ အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေအားလုံးနဲ့ @DRDO_India အဖွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ”
Congratulations to all the scientists and team of @DRDO_India on successful test firing of deadly surface to surface #BRAHMOS supersonic cruise missile in Andaman and Nicobar Islands.
A proud moment for India pic.twitter.com/rpn9MQ9JUc
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 24, 2022
အက်ဒမန်နဲ့ နီကိုဘာကျွန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုကိုးကျွန်းရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ၇၄ ကီလိုမီတာ (၄၆ မိုင်) ခန့်အကွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။
အောက်မှာ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ဗီဒီယို (ဘယ်) နဲ့ Rijiju ရဲ့ တွစ်တာဗီဒီယို (ညာ) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ screenshot ဖြစ်ပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ဗီဒီယို (ဘယ်) နဲ့ Rijiju ရဲ့ တွစ်တာဗီဒီယို (ညာ) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ screenshot
အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်အသံလွှင့်ဌာန All India Radio ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာလည်း ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုအကြောင်း မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းမှာပါဝင်တဲ့စာသားတချို့က အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “မြေပြင်မှ မြေပြင်ပစ် အသံထက်မြန် BrahMos ခရုဇ်ဒုံးကျည်ကို အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဘာကျွန်းတို့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံက အောင်မြင်စွာ ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒုံးကျည်သည် ပစ်မှတ်ကို တိကျသေချာစွာ ထိမှန်ခဲ့သည်။ BrahMos ဒုံးကျည် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်နိုင်မှုကို လေတပ်ဦးစီးချုပ် VR Chaudhari က ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်”
အက်ဒမန်နဲ့ နီကိုဘာကျွန်းအခြေစိုက် စစ်ဌာနချုပ်ကလည်း မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ ဒုံးကျည်ရဲ့ ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာကို Twitter မှာ တင်ထားပါတယ်။
#CAS Congratulates #ANC on successful test firing of #IAF extended range surface to surface #Brahmos missile @A&N Islands on 23 Mar. The missile hit the target with #Pinpoint accuracy. #CAS & #CINCAN witnessed the successful launch. #IAF#ANC#IDSpic.twitter.com/tA6qstpYWC
— Andaman & Nicobar Command (@AN_Command) March 23, 2022
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ မြန်မာတပ်မတော်က ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်လောက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမျိုးတွေ မရှိသေးပါဘူး။